Ikhabethe Lomsiki Wezinkuni - I-Airbnb
Ikhabethe Lomsiki Wezinkuni
Collooney, Sligo, i-Ireland
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Sinead
Itholakala kahle enhliziyweni ye-Union Wood, 7miles ukusuka edolobheni laseSligo le khabethe ethokomele eziqukethwe ihlinzeka ngendawo ekahle yokubalekela kukho konke, ngokudoba, ukuhamba izintaba kanye nemizila yebhayisikili yezintaba emnyango wakho nakuba isenzo singekho kude! Lesi yindawo ekahle yokuma ohambeni lwakho lwe-Wild Atlantic Way noma uma uya emshadweni ose-Markree Castle noma ehhotela lase-Castle Dargan.
Abazali bami, uBrendan noSheila bazobe bekhona ukuze bakubonise futhi bakwemukele nge-Sligo yangempela!
I-Woodcutter's Cabin iyikhabethe elakhiwe ngezandla, elenziwe ngesitayela samalogi elakhiwe phezu komfudlana ogelezayo, eliphakathi kwezihlahla ezivuthiwe ze-Union Wood, namamitha ayi-100 ukusuka osebeni lomfula i-Ballisodare.
Indawo yokuhlala iyipulani elivulekile elinekhishi (ihhavini yegesi, i-microwave, iketela, i-toaster. Akunahhavini), ikhawunta yasekuseni, indawo yokuhlala nendawo yokulala enokubukwa komfudlana nengadi (kanye nezilwane ezimbalwa uma unenhlanhla!) yokugezela ehlukene. Umbhede ophindwe kabili, ongahlukaniswa ube ngama-single amabili, ubheke endaweni eyihlathi (hlala ubhekile ingwejeje ebomvu engavamile!)
Kunesitofu sezinkuni esivuthayo ekhabetheni ukuze silenze lithokomele nakakhulu! Uma usazisa ukuthi uzofika ngasiphi isikhathi sizozama ukwenza isiqiniseko sokuthi ikhanya kusenesikhathi.
Idolobhana laseCollooney, elihlinzekwa yizitimela namabhasi, liqhele ngamakhilomitha angu-1.5 ukusuka eKhabhini futhi linezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela kanye nekhefi. Idolobha laseSligo liqhele ngamamayela ayi-7. I-Markree Castle kanye ne-Castle Dargan Hotel cishe imizuzu emi-5 ukuya khona. Izinkonzo zamatekisi endawo ziyatholakala.
4.98 · 372 okushiwo abanye
USheila noBrendan bazobe bekhona ukuze bakubingelele lapho ufika futhi bakubonise indawo. Banganikeza izeluleko/amacebiso endaweni, ikakhulukazi izindlela eziningi zokuhamba nokuhamba ngebhayisikili ezizungeze i-Wood.
Hlola ezinye izinketho ezise- Collooney namaphethelo